Ixabiso lokucoca ixabiso elibi libiza?
Ukucoca utyalo-mali abomileyo, izixhobo zokucoca ngokucoca zihlala zixhalabisa bonke abantu. Ixabiso lokucoca ixabiso elibi libiza? Kodwa kwakhona ichaphazela bonke abatyalo-mali bokucoca. Le ngxaki inxulumene ngokusondeleyo kumatshini ococekileyo ococekileyo, ufuna ukwazi impendulo, vele uhambe ukhangele ukuhlamba impahla, umcebisi-mali oyintloko.
Ixabiso lokucoca ixabiso elibi libiza? Le ngxaki ayinakuyiphatha efanayo. Ngokukodwa, izixhobo zokucoca ezinomileyo ziyabiza okanye azinjalo, azihlanganisi kuphela nomqondiso wezinto zokucoca eziwomileyo, kunye nesayizi yobuxhobo, uhlobo, umgangatho kunye nezinye izinto. Ukuba abatyali-mali bajoyina iimpahla zokuhlamba, izixhobo zokucoca ezinomileyo azibizi nhlobo.
Joyina enye yezinto ezihlambulukileyo zokuhlamba iimpahla ngoku, kungekuphela kwindleko enkulu yabacoca abacocekileyo ukuba badibanise nabo banokuthenga uluhlu lwezinga eliphezulu kunye nexabiso elincinci lempahla yokucoca. Ngoku ukuthenga isethi yezinto ezincinci zokucoca i-R800 kuphela, kubandakanywa nezixhobo zonke, ukusetyenziswa kweendleko eziphezulu.
Izixhobo zokuhlamba iimpahla eziqhathaniswa nezinye izixhobo zokusebenza zokucoca ezinomileyo, zineempembelelo ezinzulu zoshishino kunye nokukhuphisana kwamashishini. Thatha ukuhlambulula ukuveliswa okuzimeleyo kwe-othomathiki yokuguqula ioli ye-cleaners cleaners, UKUSEBENZISA iteknoloji yehlabathi ephezulu yokugcina ulondolozo lwamandla kunye nokukhuselwa kokusingqongileyo owomileyo, intengo ephantsi i-20000 RMB kuphela, ixabiso lokuhlamba elomileyo alibizi.
Bangaphi imali abanokuthenga abathengi abomileyo? Ukuba ungathanda ukuvula abacocisi abanzi abomileyo, uhlamba kunye ne-elution nganye ye-frequency elution nganye-in-one, i-tetrachlorethylene i-cleanersers eyomileyo, iingubo zokuhambisa iingubo, i-luxury-door door-disinfection khabhinethi, njengento yokucoca i-multifunctional clothes ukhetho, amaxabiso avela kumashumi amawaka e-RMB ukuya kuma-RMB amashumi, ngokuqhelekileyo ancinci kunamanye amathuluzi okucoca.
Ixabiso lokucoca ixabiso elibi libiza? Ngaba isisitshixo sokuba ukhethe i-brand right dry clean equipment. Ngethuba nje ukujoyina impahla yokuhlambela, ixabiso lokucoca ixabiso lempahla liya kuphantsi. Ukuba nawe ufuna ukuthenga intengo ephantsi, imveliso enomgangatho ococekileyo ococekileyo, khawukhawuleze ucofe ngeenkonzo zokuthengwa kwabathengi ngekhompyutha ngokubanzi.
Inqaku lokugqibela: Ukuthenga izixhobo zokuhlamba ...
Inqaku elilandelayo: Ixabiso elingakanani lomatshin...